DOWNLOAD FaceTime IHE PC window 7, 8 & Ohere 10 🤑
Hello Facetime n'Anya! Ị mgbagwoju anya banyere otú i nwere ike iwunye FaceTime gị Ohere pc ka Facetime maka Window 7, Facetime maka Window 8 ma ọ bụ bụrụgodị na ị chọrọ ibudata ma wụnye FaceTime gị window 10 sistemụ jesonu isiokwu a?
download FaceTime maka pc
FaceTime maka pc windo 10
FaceTime n'ihi na windo 7 laptọọpụ
nwere ike ị FaceTime na a na kọmputa
FaceTime maka pc download
Ebe a n'isiokwu a, Enyewo m ụfọdụ mfe atụmatụ na aghụghọ nke ga-ekwe ka ị na-eji ọkacha mmasị gị ngwa FaceTime ka ọrụ na window n'elu ikpo okwu.
Ọ bụrụ na ị na-eji window laptọọpụ na chọrọ download FaceTime n'ihi na windo 7 laptọọpụ mgbe ọ bụla, na ihe nile kpuchie ke ibuotikọ nnọọ ndị a dị mfe usoro nke e nyere n'okpuru.
Facetime site Apple Inc. bụ otu n'ime ndị kasị mmekọrịta, bara uru na kacha videotelephony software na emetụtala ụwa dum. Na nke a digital oge, ọ bụla mmadụ chọrọ ka ojikọọ mmadụ na ndị ọzọ.
Site n'enyemaka nke Face oge, i nwere ike ịmara eme ma video na ọdịyo akpọ ịnọgide mmekọrịta na gburugburu gị. Na Itie nke oge, na ojiji nke FaceTime ngwa tremendously ụba n'etiti Apple ngwaọrụ ọrụ.
Nke a na-eji ngwa bụ asọmpi site n'aka ndị ọzọ dị ka ọ na-enye ohere na-eduzi ihe ndị kasị elu-edu video na audio oku. Dị ka nnyocha, na ọtụtụ ndị na-enwe Apple ngwaọrụ tinyere iPad, iPhone, Mac, na iPod na-eji FaceTime na-anọ na-eleta ha na ụlọ ọrụ ụwa.
Ná mmalite, Face Oge e nanị mere maka Apple ngwaọrụ. Ma ruru ya oru oma arụmọrụ na ina, ugbu a ị nwekwara ike ibudata FaceTime maka PC. Bụ na-akpali? The nkwurịta okwu usoro agbanweela kpamkpam ugbu a.
Ndị na-ahọrọ ime ihe video na audio oku kama e-Gburu ma ọ bụ Gburu. Site n'enyemaka nke a smart ngwa nke Eziokwu Oge, ị nwere ike mfe na-ekwu ma ọ bụ ịhụ onye ọ bụla nọ ọdụ n'ebe ọ bụla gburugburu ụwa.
Ná mba ụfọdụ dị ka US na UK, ọtụtụ ndị na-eji Apple ngwaọrụ nke-eme ka ọ bara uru n'ihi na ha na-anọgide jikọtara ndị ọzọ Apple ngwaọrụ ọrụ.
Ma mba ụfọdụ, na-eji ọkụ na-ahọrọ iji na PC maka ha kwa ụbọchị digital eme. Ya mere, iji mee ka ala dị otú ahụ ọrụ, isiokwu a ga-eduzi otú rụọ ọrụ nke ọma na-eji iOS ngwa gị na kọmputa. Nke a na-enyere gị jikọọ na ndị ọzọ ndị na-eji dị iche iche Apple ngwaọrụ.
N'ihi ya, na-agụ isiokwu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata, wụnye na-agba ọsọ ahụ na-apụghị ikwere ngwa nke Eziokwu Time gị Personal Computers.
1 Download na Wụnye Facetime App N'ihi na PC:
2 Olee otú Download na Wụnye FaceTime maka PC?
2.2 Akụkụ nke FaceTime App gị PC:
Download na Wụnye Facetime App N'ihi na PC:
A, Apple nwere na-wuru ngwa nke FaceTime na niile ngwaọrụ tinyere iPhones, iPods, iPads, na Mac. Ma, ị gaghị na-a nhọrọ na gị na PC. N'ihi nke a, i nwere iji wụnye Face Oge site na iji ihe emulator. Nke a nbudata usoro agbakụ ndị na-esonụ:
Firstly, ị ga-download na iPadain emulator. Ị nwere ike inwe ya site na iji nyere njikọ: ipadian.net
Mgbe nbudata iPadian emulator, oghe ya file ma wụnye ya dị ka nyere chọrọ na ntuziaka.
mgbe, mgbe gị iPadian emulator arụnyere, i nwere ike ugbu a na-emeghe ya na banye site n'inye ozi achọrọ. Nke a nzọụkwụ gị mkpa Apple ID na paswọọdụ.
Ugbu a, i nwere ike inwe gị FaceTime ngwa. Ma ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ ya mgbe ahụ na ị nwere ike mfe ibudata ya na enyemaka nke Apple App Store mmemme.
Egbu, tinye ọ bụla kọntaktị nke Apple ụwa site na iji ya email, ọrụ id ma ọ bụ a ọnụ ọgụgụ na-amalite na-eme ka ọdịyo ma ọ bụ video oku. I nwere ike ime nke a site na ịpị video ma ọ bụ telephonic icon nyere na ngwa.
Olee otú Download na Wụnye FaceTime maka PC?
Ọzọ nhọrọ iji FaceTime gị PC na-esonụ a ole na ole dị mfe nzọụkwụ bụ dị ka ndị:
Facetime on PC bụ kwere mee mgbe nbudata BlueStacks gị PC.
Ịnwere ike ibudata BlueStacks ngwa si ukara saịtị bluestacks.com.
Mgbe nbudata BlueStacks, wụnye ya na ozugbo download enwezu, Malitegharịa ekwentị gị PC.
Ọ na-ewe nkeji ole na ole ka initialize mgbe launching Bluestack ngwa. Anaghị amanye nso, o nwere ike ime ka ire ure nke software.
Ozugbo PC Malitegharịa ekwentị, emeghe BlueStacks ngwa gị usoro.
Gaa na menu na pịa play ụlọ ahịa ngwa.
Mgbe mmalite na Play Store, Pịa na search na ụdị Facetime na mgbe ahụ na Download FaceTime n'ihi na windo pc.
Ka ịwụnye na Facetime ozugbo, pịa Mepee ma ọ bụ Run, na mgbe ahụ na soro ntuziaka na gị na ihuenyo. *Ọ bụrụ na ị na-kpaliri n'ihi onye nchịkwa paswọọdụ ma ọ bụ nkwenye, pịnye paswọọdụ ma ọ bụ nye nkwenye.
Ka ịwụnye na FaceTime mesịrị, pịa Save, na mgbe download echichi na faịlụ gị na kọmputa. Mgbe ị dị njikere iji wụnye FaceTime, abụọ-pịa faịlụ, na mgbe ahụ na soro ntuziaka na gị na ihuenyo. *Nke a bụ a odi mfe nhọrọ n'ihi na i nwere ike ike iṅomi echichi faịlụ maka nje tupu ị gafee.
Ẹkedori FaceTime gị PC.
Olee otú Jiri Face Time na gị Pc?
Mgbe wụnye ọkacha mmasị gị ngwa nke Face Time gị PC, ị ga-eso ndị bụ isi iji malite iji ya:
Mgbe nbudata na na na wụnye, ẹkedori FaceTime ngwa. I nwere ike ime nke a site na ịpị ya nchekwa.
Mgbe ị malite ngwa a maka oge mbụ, ị ga-aba gị email id na nọmba ekwentị. Nke a na-enyere aka mee ka gị na ID na ike ga-eji site ọrụ ndị ọzọ iji kpọtụrụ gị. Ọ bụrụ na i nwere ihe ID, ị nwere ike iji ya ma ị nwere ike ime ka a ọhụrụ otu n'ime sekọnd ole na ole
Mgbe nbanye usoro, ị ga-ahụ a navigation panel na n'aka ekpe gị FaceTime ngwa. Nke a panel na-agụnye a ndepụta nke aha ndị mmadụ niile na onye ị chọrọ ijikọ.
Chọpụta onye ị chọrọ na-amalite a na mkparịta ụka. N'ihe banyere iji FaceTime on a PC, i nwere ike na kpọtụrụ onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ị maara ha email adreesị.
Mgbe nke a, ị na-echere maka Ịkpọ oku-elu nnọkọ.
Mgbe ahụ mgbe ndị ọzọ ọrụ na onye ga-eburu gị oku, na ị na-niile ka na-enweta nke kacha mma mma video ma ọ bụ ọdịyo na oku.
Mgbe ọ gụchara mkparịta ụka gị, ị pụrụ nanị pịa na End Call button kwụsị oku.
Akụkụ nke FaceTime App gị PC:
Nke a dị ịrịba ama videotelephony ngwa nwere ọtụtụ uru ma ọ na-enye pụrụ iche nsonaazụ ya ahịa. Ụfọdụ n'ime ya na-akpali ndị na-:
Nke a na-eji ngwa na-nanị e maka video ọkpụkpọ. The echiche bụ isi bụ ime ka ndị mmadụ jikọọ na-eme ka ha nso na-enyemaka nke video ngwa.
Nke a software e mere nke ọma ka i wee na-enweta elu-edu amuma maka video oku. The ozi ọma na-Face Time na-now na-akwado 1080p na Personal Computers.
Iji na-enweta nke a, gị usoro ga-enwe na-wuru ese foto. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na igwefoto mgbe ị nwere ike ịzụta a webcam.
The Face Time na-awade widescreen 16:9 akụkụ. Nke a na-enye ihe ndị magburu onwe ọkpụkpọ ahụmahụ mgbe ị chọrọ ijikọ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ruru ya àgwà na irè, a ngwa a na-ewere dị ka ihe kasị mma dị ka tụnyere ya asọmpi gụnyere ozi, Skype, Google Duo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Good audio oku:
Ke adianade ahụkebe video oku feature, ị nwekwara ike iji audio nhọrọ oku. Ọ na-nwere nnọọ mma ụda àgwà irrespective nke anya
Foto na Foto dị na Njirimara:
Nke a na-enyere gị anya mma na-egosipụta site gị obere picture n'akụkụ mgbe ị na-arụsi ọrụ ike na gị oku.
User- enyi na enyi interface
Ọzọ asọmpi uru nke FaceTime gị PC bụ, o nwere dị mma ọrụ na onye-enyi na enyi interface. Ọ bụ otú ahụ dị mfe, ezigbo, na mfe. Onye ọ bụla nwere ike iji na-aghọta ya nnọọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ihe mere na ọtụtụ ndị ọrụ na-kpam kpam na ịhụnanya na-FaceTime ngwa site Apple.
N'ihi na nzuzo gị na nche, ị nwere ike igbochi ọ bụla na kọntaktị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-njakịrị ma ọ bụ iwe ị, niile i nwere ime bụ na-egbochi onye ahụ site na itinye aha ya ngọngọ-ndepụta
Tụkwasị na nke a, Face Time na-enye ndị ọzọ mara mma atụmatụ
• Ị nwere ike mfe iru gị chọrọ kọntaktị site nnọọ iji ha Apple ID ma ọ bụ nọmba ekwentị.
• Ị nwere ike na-enwe otu oku site na FaceTime. na-akpali mmasị, a ngwa na-enyere gị jikọọ na ruo 32 ọrụ ọnụ
• Iji nwere fun na mmekọrịta mkparịta ụka, i nwere ike iji akwụkwọ mmado na Animoji
• Mgbe video oku, i nwere ike iji gị ese foto na ụzọ abụọ
I nwere ike na-egosi ha ihu gị site na iji a n'ihu igwefoto nke PC ma ọ bụ
Ị nwere ike iji azụ igwefoto ka enyi gị na-ahụ ihe ị na-ekiri
• Iji inwe na aka ndị ị hụrụ n'anya ngwa ngwa, ị pụrụ ime ka gị na ndepụta nke ọkacha mmasị.
• Ị nwere ike na-enwe Face Time site ma Wi-Fi ma ọ bụ gị data njikọ
• Ị nwere ike iji nke a ngwa dị iche iche asụsụ dabere n'elu mmasị gị
M olileanya na isiokwu mezuworo ihe nile nkọwa ị chọrọ iji FaceTime gị PC. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, na kwuru banyere ndị ikwu igbe. M ga-aza gị ajụjụ na-edozi gị gbara ajụjụ.